Fitsapana an'arivony an'arivony niandry an'i Afrika Atsimo - teles relay
Fitsapana an'arivony an'arivony niandry an'i Afrika Atsimo
By Chinde On Jona 14, 2020
MTN Congo, miaraka amin'i Ayoba, dia manome fifandraisana maimaimpoana ary…
Inde: Tsy fitoviana misy eo amin'ny isan'ny aretina, Covid-19 mavitrika…
COVID-19: Kamerona mangataka ny volavolan-dalàna momba ny lalàm-paritany
Tamin'ny faran'ny volana Mey, ilay firenena, izay manao politikam-panadinana faobe dia nahitana fitiliana 100 niandry raha zahana. Amin'ny olana, tsy fahampian'ny réagent eran'izao tontolo izao, Epicenter de Covid-19 areti-mifindra ao amin'ny kaontinanta, i Afrika Atsimo koa dia firenena izay manao fitsapana betsaka indrindra. Olona maherin'ny 1 tapitrisa no nosedraina hatramin'ny nahatongavan'ilay virtoaly tany amin'ny faritany tamin'ny 5 martsa. Anisan'izany, tranga 58 568 - ary fahafatesana 1 284. Nitombo avo roa heny ny tarehimarika tao anatin'ny tapa-bolana, nanamafy fa taorian'ny famenoana feno nandritra ny volana aprily, dia nihena ny volana Mey, niditra tao amin'ny fivoaran'ny valanaretina ity firenena ity.
Mba hanaraka ny fihanaky ny valanaretina pesta dia nametraka politikam-panadinana goavana ny firenena, izay nitentina 15 isa isan'andro. Saingy ny laboratoara dia sahirana mijanona kely. Tamin'ny faramparan'ny volana Mey, dia efa saika olona 000 100 no miandry hotsapaina, araka ny filazan'ny Ministeran'ny Fahasalamana.
Ahoana ny fomba nahitan'i Afrika atsimo (hatreto) mba hanalefahana ny làlana
Ny niandohan'ny fitohanan'ny fifamoivoizana: tsy fahampian'ny fitaovana. "Miatrika ny tsy fahampian'ny famoretana amin'ny ankapobeny isika, fanamby izay lasa fahasarotana ho an'ny firenena maro", nanamarika ny minisitry ny fahasalamana Zweli Mkhize tamin'ny 26 mey, tamin'ny famoahana an-gazety notononin'i News24. Andro vitsivitsy taty aoriana dia nanapa-kevitra ny governemanta hilalao ny fangaraharana mikasika ny tena olana taorian'ny herinandro nolavina. "Tsy misy fahatarana", efa niaro ny serivisy National Heath Laboratory Services (NHLS), miandraikitra ny fitsapana, raha miakatra hatrany ny tsaho momba ny fisian'ny fitohanan'ny fifamoivoizana nanomboka ny volana martsa, raha tsiahivina Mail & mpiambina.
24 ora ka hatramin'ny 14 andro hahazoana valiny
Na izany aza, mendrika ny mangarahara io lohahevitra io. "Ity fahatarana ity dia misy fiantraikany lehibe amin'ny fahafaha-mamantatra ny fomba hielezan'ny tsimok'aretina ary ny fiarahamonina izay avo indrindra. Izy io koa dia manome ny fomba fitantanana ny tsy fahampian'ny loharanom-pitsaboana amin'ny fanararaotana azy ”, mamaritra ny Mail & mpiambina.
Ny fanemorana ny famakafakana ireo fitsapana dia midika ihany koa fa afaka mijanona andro maromaro ny olona tsara fanahy nefa tsy mahalala ny toerany, tandindonin-doza amin'ny loza ataon'ireo manodidina azy. "Amin'ny toerana maro manerana ny firenena, [fe-potoana ahafahana mahazo ny valiny] nandeha tamin'ny efatra amby efatra-polo ora ka hatramin'ny dimy ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo andro ”, hoy ny manam-pahaizana roa amin'ny a forum amin'ny tranokala manam-pahaizana manokana Bekhisisa.
VAKIO IZANY#AlcoholMustFall. Afrika atsimo: miaraka amin'ny fanodinkodinana, tokony ataontsika ve ny fandraràna ny fivarotana toaka?
Mba hamahana ny olana dia niantso ny governemanta ny mpanoratra mba hamerina hijery haingana ny paikadim-panadinana ao amin'ny forum iray navoakan'ny Daily Maverick fiandohan'ny volana Jona. Politika fanodinana masobe "Raha ny fahitana azy dia tsy miraharaha ny zava-misy amin'ny krizy izay misy fiantraikany amin'ny fahafahan'ny Afrika Atsimo manohana ny fitsapana an'i Covid-19".
Mifanohitra amin'izany aza, manome soso-kevitra ny fampiharana ny politika lasibatra kokoa izy ireo: "Ny loharanom-pitsapana voafetra azo atsy Afrika Atsimo [...] dia tsy maintsy afenina any amin'ny toerana lehibe indrindra ny filana, dia ao amin'ny tobim-pahasalamantsika."
Maherin'ny 55 taona sy ny mpiasa mpitaiza
Ny famerenam-bokatra ny paikadim-pitsapana azy fa ny faritany Western Cape, izay tena voakasik'ilay valanaretina ao amin'ny firenena, dia nahavita namaha izany olana izany tato ho ato. tatitra News24 :
Nihena be ny fahatarana satria voafetra [ny faritany] ny fitsapana azy ireo amin'ny olona mihoatra ny 55, ireo manana soritr'aretina Covid-19 ary mpikarakara. ”
Raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana ao amin'ny faritany, dia nahatratra 28 ny isan'ny fanadinana miandry tamin'ny faramparan'ny volana Mey ka hatramin'ny 000 tamin'ny alarobia 3 jona.
Nasionaly, mihatsara ny fahaiza-manao fikarakarana. Tamin'ny 10 Jona, nanao fitsapana “mihoatra ny” 63 i Afrika Atsimo, hoy ny tarehimarika avy amin'ny National Health Services Laboratory izay nohadihadihan'ny BusinessTech. Ankoatra ny tsy fisian'ny réagent, i Afrika amin'ny ankapobeny dia miatrika fitsapana iray izay mety handrakotra ny zava-misy ny valan'aretina amin'ny kaontinanta. "Tsy maintsy manana vokatra vita any Afrika isika, tsy afaka manohy manafatra vokatra fototra", hoy ny talen'ny afrikana afovoany ho an'ny fifehezana sy ny fisorohana ny aretina, John Nkengasong, ny faran'ny volana Mey.
loharanom-baovao: https: //www.courrierinternational.com/revue-de-presse/crise-covid-19-en-afrique-du-sud-des-dizaines-de-milliers-de-tests-en-souffrance
Chinde 75 Lahatsoratra 0 hevitra
Faly, Olivier Minne manolotra ny tantarany voalohany
Queen Elizabeth II: ao ambadik'ireo fiomanana amin'ny fankalazana ny tsingerin-taona nahaterahany amin'ny Windsor Castle
Anaran'ny toerana sy tsangambato any Kamerona: Ny mariky ny fanjanahan-tany
Kamerona / Alternation eo an-tampon'ny Fanjakana: "ny zanaky ny tany avaratra ...